Top 10 Michael Jackson Iingoma zama-70s
I-Top 10 kaMichael Jackson Iingoma ze-70s
Iziganeko ezibalulekileyo zomculo ezamnceda ukuba abe ngu-King of Pop
UMichael Jackson wayenokuba yinto evuyisayo kwiminyaka engama-80 ubudala , kodwa wayeseyinkwenkwezi eyi-11, kwaye i-superstar ngexesha lokutshatsha. Olu luhlu lwezihlandlo zakhe zomculo eziphezulu ezi-10 ezivela kwi-Seventies, iminyaka elishumi evelele indlela yokunyuka kwakhe okuphawulekayo kwi-megastardom, ibonisa indlela uMichael Jackson aguquke ngayo uFrankie Lymon entsha kwi-demon disco, umculi ovuthayo, , kwaye, kamva, ngumphilisa wehlabathi.
Ukuba ufuna ukuva uxhamlwano oluchanekileyo phakathi kwelifa likaMichael kunye nalabo abalobi bakhe be-stylistic, khawula ukuphulaphula le stunner, isembozo seSmokey yangaphambili kunye neNgoma yeMimangaliso eyayiye, ngokumangalisa, ixhomekeke kwinqanaba elilandelayo " Ndifuna sibuyelane." Uyabona ukuba kutheni uBerry Gordy wayefuna ukwenza uMichael ulandelayo uFrankie Lymon, kodwa unokuva ukuba ububanzi bakhe bobuncwane babesele bugqithise iLymon: UMichael uthinta yonke into esuka kwi-doo-wop eya kuJackie Wilson kuSam Cooke eneminyaka yakhe elishumi ubudala. phambili. Yonke imbali ye-R & B, ngamanye amagama.
Wonke umntu uyathanda "Ndifuna Ubuyele" kwaye "ABC," kunye nesizathu esihle. Kodwa oku, isithathu esingatshatanga kwiCandelo leNkampani likaJackson 5 liyabetha kunye neyesithathu ukuba liqeshe iifom efanayo, ngokuqinisekileyo liphucula kwizinto ezimbini zokuqala - ziqinisekiswa ngokuqinisekileyo, zombini kwi-Groove kunye nokunikezwa kukaMichael. Esi sisandi somncinci we-original 5 ukulawula isixhobo sakhe kanye kunye. Wabuya uze ukhangele kule vesi yesibili ngokusondeleyo.
Kuye kwacaca kakuhle ukuba uMichael wayenokukhula ngokuvakalayo ngaphezu kweminyaka yakhe, uhlobo oluya kumvumela ukuba alungise nantoni na ingoma aze ayihlangule ngokuqinisekileyo. Kodwa oku kutshaba ngoMeyi , ebhalwe ngumntu ongaphezu kweminyaka emibili ubudala, kunomnye umgangatho wobomi ngokupheleleyo - nawuphi na phakathi uqonda ukulahlekelwa kunye nokulangazelela, kodwa ukuthanda ukuziphatha okubi ngokwesondo? Ngokukodwa umntwana ongaziqabane? Uvela phi into enjalo?
Ewe, ingoma yothando kwi-rat. Ubuncinane, yinto enjalo kumxholo wokuthengiswa kowe-1972 wesigxina sequel uBen, apho umxholo wecatshulwa ebona umngane ongcono kumntu obulalayo. Kodwa uMichael, obonisa ubulumko obungaphezu kweminyaka yakhe, uyazi ngokwaneleyo ukungawunaki umongo kwaye uyicule entliziyweni, umculi ovela kumntwana omnye onesizungu uphinde ufuna "indawo eya kuyo." Inkcazo yeklasi yokuphuhliswa kokubanjelwa, uMichael akazange akwazi ukukholelwa ukuba imouse ingaba ngumhlobo (ukuba ku-movie, kufuneka kube yinyaniso), kodwa ukuthanda kwakhe okungekho nto, ukuba yiloo nto beyiyo, baqala apha.
I-Jacksons yaqala ukuzama ukuhlaziya i-albhamu yayo yesibili, ngo-1970 i-ABC, apho ngokwenene benza umsebenzi ohloniphekileyo uGeorge Clinton "Ndiza kuBet You." Kodwa le mihla yithatha i-genre, ephantse iwela kwindawo yongxowankulu, ngowokuqala ukuvumela uMichael ukuba ahlakulele ilizwi elimnandi eliza kuza kumkhonza ngokufanelekileyo nanini na ukuba afune ukunyaniseka. Ayikho ingoma enkulu, ngokukodwa kumxholo welifa labazalwana, kodwa isinyathelo esibalulekileyo senkwenkwezi yangomso.
I-Gamble-Huff "Jabulela" yayiyi-introductions esemthethweni yabazalwana kwisiqingatha seshumi elinesibini, kwaye ngokuqinisekileyo "Ukudansa iMicrosoft" (i-hit ephefumlelweyo ekudaleni umdaniso weRobot!) Yabanika i-cred credit. Kodwa le nto iphosa, ibhalwe nguMichael noRandy ngokwayo, yakha itemplate yonke into i-Moonwalker eyayiyenza kwi-albhamu yakhe elandelayo yesibini: i-albhamu ephezulu kodwa ingxamisekileyo njengesihogo esezantsi, uhlobo lomculo olubonisa kwaye lubonisa ukuba udaniso alukho nje ummeli wenkululeko, kodwa ifomu efanelekileyo.
"Yiloo nto oyifumanayo (ngokuba yiPoliti)" (1978)
Iingxelo zeApeic zeNkcazo
Inkosi yePapa yokunyanzeliswa kwexesha elizayo phakathi kwe-tempo ballads yonke inayo i-genesis yayo apha apha kule nombolo ebhaliweyo, ebonisa yonke into esuka "kwiNdalo Yabantu" ethi "Intombazana Yami" kunye neengcamango zayo ezinokuthi "uJack" Ucinga ukuba unokuthenga indlela yakhe yokuthanda ukuba ulungile. Ubuqhetseba? Inkinga yeMidlife? Ngubani owaziyo, kodwa kukukhethiweyo kwezinto eziphathekayo kwi-superstar eneminyaka engama-21 ubudala, ngokuqinisekileyo. Kwaye kutheni ukuba uMichael wayebiza ukuba "uyakhala ngenxa yakho, uyakhala ngaye"?
Ukususela kwi-albhamu ngaphandle kwe-Wall, lo ngumngqumbo wokuqala kaMichael u-ballad, kwaye kwakhona, ubeka imali enamandla akhe kwingoma awazange ayibhale, kungekhona ukuze sikhankanywe ngobumnene bakhe (oko kukuthi i-hick yayiya kwenza), kodwa kunokuba ikhuphe iidemon zayo zodwa kwaye zizisole. Into entsha yenkwenkwezi ye-solo eyayizozisola ihlala ibharha yecala ekhangayo yonke yayo; kodwa loo nto idibeneyo ekupheleni, ngubani umlimi uPiincy Jones owayefuna ukukhwela, wayeyinyani.
Ngenye indlela ebizwa ngokuba yi-"Heartbreak Hotel" emva kokusongelwa kwesigwebo sika-Elvis's estate, le nomnyama, inani elibukhali libeka isiseko esicacileyo kwimisebenzi yakhe ye-Eighties, njengoko iqhuba ngokunyaniseka kwinqanaba elincinane le-cinematic. Ebhalwa nguMichael, iqulethe isilwane eside eside esilungisa kwi-funk ephosakeleyo ephukile nge-robotic interludes; mhlawumbi kubaluleke ngakumbi, kubonisa ukubonakala kokuqala kwezinto ezininzi zokutyikitywa kwegama lakhe-isingqungquthela, i-ad-libbing yayo engapheliyo, i-baritone yakhe "omdala" kunye nodumo "odumile"!
Olunye inyathelo elibaluleke kakhulu kuKumkani wePop: wayekwenzile iingoma malunga nokuzisa umhlaba kunye neengoma malunga nokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa, kodwa oko kwakuyixesha lokuqala (kwaye, ngokudabukisayo, elinye lihlandlo kuphela) umculo ukudala uxhulumaniso phakathi kwezi zibini, ebonisa ukuba amandla akhe okuthinta abanye angakhokelela ngqo ekuvuleni enye inguqu engcono kubo abahlala ngaphakathi ngaphakathi. Eyona nto ithetha ukunyaniseka kwizinto ezinengqondo phakathi kwethu; kwakhona kwakhona, ukuthululwa kweentlungu zomhlaba ngokugqithiseleyo kubonisa ukuba wayenalo hlobo lohlobo olunjalo.
I-10 enkulu kunazo zonke uPhilly Soul Hits
Abazalwana baseDoobie: i-Biker Boogie ihambe kakhulu
I-Funkiest Disco Group: I-KC kunye ne-Sunshine Band
Chic: Iingoma kunye neMbali yeDisco "I-Greatest" Band
Abachweli (i-Band): Intsapho yokuqala yohlobo lwe-Sunshine Pop
I-Orchestra ye-Electric Light (ELO): I-Power-Pop Symphony
Elon GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Imbali yamachibi okubhukuda
Ukunyuswa kobugcisa bePapa kunye nokuPhefumlelwa
I-5 Best Best Chick Liter Author
Quotes Cute Breakup
Ukuzalwa kwakhona nokuzalwa kwakhona kwiBuddha
Ziyintoni i-Volatility in Chemistry?
Ngaba Amanzi Amathambo Aya Kubi?
Ukudala Isifundo Esikhulu Ukukhuphula UkuFunda kwabafundi
Iingcamango zeProjekthi zeSayensi zePhysical Science
Izwi njengeMculo yomculo
Sonnet 29 Isikhokelo soFundo
Ukusebenzisa amaxwebhu e-Data Safety Safety
Ukujongana neengxaki zomsindo we-Whirring Under the Hood
Iikharityhulam zeBanga lesi-12
Indlela yokwenza iNcwadi yamaSithunzi